Liverpool Oo Xasuuqday Watford, Saalax Oo 4-ley Dhaliyey & Reds Oo Kaalinta 3aad Xijisatay %
Kooxda kubada cagta Liverpool, ayaa waxay guul weyn oo muhiim ah waxay kaga gaartay gurigeeda dhigeeda Watford, kadib markii ay la ciyaareen kulan ka tirsanaa horyaalka Premier League, ee wadanka Ingiriiska.
Ciyaartii labadaan kooxood dhex-martay ayaa kusoo idlaatay 5-0 oo lagu soo karbaashay kooxda Watford, waxaana goolasha ukala dhaliyay Reds ciyaartoyda kala ah: Maxamed Saalax oo afar jeer shabaqa gaaray iyo Roberto Firmino.
Saalax ayaa wuxuu kala dhaliyay goolasha daqiiqadihii kala ahaa: 4aad, 43aad, 77aad iyo waliba 85aad ee qeybtii koowaad ee kulanka – Halka xidiga reer Brazil ee Firnimo uu shabaqa soo taabtay daqiiqadii 49aad ee qeybta labaad ee Dheeshaan xiisaha lahayd.
Goolasha uu dhaliyay Maxamed Saalax ayaa waxay ka dhigan yihiin inuu hada kali ku noqon doono tartanka gool dhalinta ee EPL, isagoona leh 28 gool, wuxuuna labo gool ka sareeyaa Harry Kane oo shabaqa dhex-dhigay 24 gool.
Wuxuu umuuqdaan laacibkaan Muslim-ka ah ee udhashay wadanka Masar mid uu isaga ugu cad-cad yahay tartanka gooldhalinta ee EPL, maadaama Kane, uu illaa iyo bisha April garoomada uga maqnaan doono dhaawac dhanka Jilibka ah.
Inta uu kulanku socday ma jirin wax Kaar casaan ah oo la bixiyay, marka laga reebo Jaalo oo la siiyay ciyaaryahanka Joe Gomez oo Liverpool ka tirsan, waxaa kaloo xusid mudan in Liverpool ay haysatay kubadda 59% taasoo ka dhigay in gacanta sare ay iyada lahayd.
Guushaan ayaa waxay uga dhigan tahay Liverpool inay soo fariisaneyso hadda kaalinta saddexaad, marka laga hadlo shaxda kala horeynta ee Premier League, iyadoona kala baxeysa Tottenham oo hada leh 61 dhibcood halka Reds ay 63 leedahay.
EPLLiverpool vs WatfordMo SaalaxPremier LeagueReds